Vavaka ho an'i Santa Barbara. ? Ho an'ny vola, ny fitiavana ary ny fiarovana.
Vavaka ho an'i Santa Barbara. Mijaly amin'ireo vehivavy hafa eto an-tany Santa Barbara dia mendrika hihaona isika satria nanatri-maso ny fankahalana ny olona tokony ho tia azy. Atsangano tokana vavaka ho an'i Santa Barbara Izy io dia afaka manampy antsika amin'ny raharaha maro ary eny amin'ireo tsy manana fanantenana aza.
Ny fiainany tety an-tany, finoana feno fanaintainana sy fijaliana, na izany aza, dia nijanona tamin'ny ady tamin'ny ady niady tamin'ny tenany ihany ary na dia efa akaiky aza ny faharesen'ny fahavalony, dia nahatratra ny satroboninahitry ny dia nampanantenaina amin'ireo olo-mahatoky izay Miady amin'ny fo izy ireo.
Vehivavy tsy manam-pinoana, matanjaka, mahatoky ary namanay ao anatin'ny fotoam-pahoriana.
1 Vavaka ho an'i Santa Barbara
1.1 Vavaka Dadabe any Santa Barbara
1.2 Nivavaka momba ny fitiavana i Santa Barbara
1.3 Ny vavaka ho an'i Saint Barbara dia nahazo tso-drano ho fiarovana
1.4 Ho an'ny fahavalo
1.5 Manjakazaka amin'ny mpiara-miasa tsy mahatoky
Niaina teto an-tany izy tamin'ny andron'ny taonjato fahatelo tany Asia Minor.
Nandritra ny fiainany dia nijaly mafy izy noho ny zavatra ara-pinoana nataony hatramin'ny nisian'izy ireo ny fianakaviany. Ny tantara dia nilaza fa ny rainy dia fahavalon'ny kristianisma mafy tamin'izany fotoana izany, fivavahana iray izay nambaran'i Barbara an-kalalahana.
Izy no rainy, izay rainy, izay nanidy azy tao amin'ny tilikambo avo dia avo ho fanasaziana ny tsy fitovian'ny fivavahana.
Tamin'ny fotoana izay nohazoniny dia tsy nivadika tamin'ny finoany izy ary natao batisa ary nitory ny fivavahany tamin'ny fotoana rehetra.
Voalaza fa izany tilikambo Nisy varavarankely iray monja ary nandidy roa izy hosokafana ho mariky ny Andriamanitra tokana olona.
Rehefa niverina ny rainy, dia nanandrana azy izy ary nahazo fampijaliana sy fanalam-baraka ary i Dioscoro mihitsy no nanapaka ny lohany tamin'ny sabany teo an-tampon'ny tendrombohitra iray. Voalaza fa taorian'io famonoana olona io dia nisy taratra avy any an-danitra namely azy ary namono ny ainy.
Vavaka Dadabe any Santa Barbara
Ilay mahery kely Santa Barbara, mpiady iray, manampy ahy handresy amin'ity ady ity.
Ianao izay tsy latsaka tamin'ny fakampanoho ny ratsy, ianao izay nilaza tamim-pitiavana, ny fahoriana rehetra, mivoaka mandresy, miangavy anao aho, mitalaho amin'Andriamanitra, Tompontsika, hanampy ahy hiatrika izao fotoan-pitsapana izao.
Enga anie izy, avy amin'ny fonenany aogositra, hanome ahy ny hery Ampy izay hahasoa ny tsara.
(Ataovy ny fangatahana vola voalohany)
Tompo ô, nomenao tanjaka tsy hay tohaina i Santa Barbara hanoherana ny korontana sy ny fanaintainana lehibe indrindra noho ny fahatokianao Anao, mangataka izany isika, ho matanjaka ao anatin'ny fotoan-tsarotra sy manetry tena ao anaty fanambinana hahomby toy ny fahasambarana mandrakizay.
Amin'ny alalàn'i Jesosy Kristy Tompontsika.
(ataovy ny fangatahana vola faharoa)
Hotahin'i Barbara, izay nanadina ny maha-virjinao madio amin'ny rànao noho ny fitiavanao ny Tompo, arovy aho amin'ny tafio-drivotra, afo, loza, ary loza rehetra eto amin'ity tontolo ity.
Afaho aho amin'ny FAHAFATESANA tampoka. Miangavy ho ahy amin'ny Tompo mba hanampy ahy hahita fanambinana amin'ity fiainana ity, hiaina amin'ny fisakaizana masina ary hahatratra ny fiafaran'ny androko amin'ny fiadanam-po amin'ny fahasoavany masina.
(manaova fitakiana vola fahatelo)
Io vavaka Santa Santaara iny dia tena matanjaka!
Nampianatra antsika hiantehitra amin'Andriamanitra izy, mino fa tanteraka ny fampanantenany ary hiaina amin'ny kely sy kely. izy, izay niaritra fahantrana Afaka manampy antsika hambinina izany.
Ny fangatahana vola ho tonga amintsika amin'izao fotoanan'ny krizy izao dia ilaina ary ny fangatahana an'i Santa Barbara am-pinoana dia fihetsika fankatoavana tokony hataontsika isan'andro.
Hay vavaka na vavaka Izy ireo dia afaka mitarika antsika hanontany amin'ny fomba mety. Na izany aza, ny zava-dehibe sy ny hany tokana ananantsika mba ho fantatsika fa ny vavaka dia henoina dia ny hihazona hatrany ny finoana.
Nivavaka momba ny fitiavana i Santa Barbara
Ilay mpiady eny an-danitra, Saint Barbara, isaorana, henoy ny fitalahoako am-pitiavana, hany ka ..
(lazao ny anaranao sy ilay olon-tianao)
Mampiray ny vatana sy ny fanahiny, ny fiarovana azy ireo ka tsy hisy hiroso amin'ny fahasambarana sy ny firaisana. Notahin'i Saint Barbara i Saint Barbara (avereno ny anarana) halano ny hetahetany aminao infinito fitiavana ny faniriany tsara rariny mahery amin'ny ady tsy azo atao amin'ny fiarovana ireo mpitia mandrakizay ireo (avereno ny anaranao sy ilay olon-tianao).
Ny FITIAVANA dia iray amin'ireo antony mahatonga ny fifaliana sy ny alahelo ny fahita indrindra hatramin'ny nanombohan'ny fotoana ka mandraka androany.
Nolavina ny zanany vavy ny fitiavan'i Dadabe Santa ary izany no nahatonga azy hanao fihetsika mahamenatra toy ny famonoana ny zanany vavy.
Tsy misy olona tsara kokoa noho izy, izay halan'ny tsy tokony hatao, hahalala ny fanaintainantsika raha tsy tafaverina amin'ny fitiavana.
Io vavaka io dia afaka manampy antsika hanafaka ny angovo ratsy, mba hitiavan'ny fitiavana antsika ary hahagaga antsika.
Ny vavaka ho an'i Saint Barbara dia nahazo tso-drano ho fiarovana
Saint Barbara, virjiny sambatra, be hery be, homba anao anie Andriamanitra, ary hiaraka amiko amin'ny làlan-tsoa ianao.
Amin'ny sabatra fandresinao no manafaka ahy amin'ny ratsy, ny tsy rariny, ny fialonana ary ny maso ratsy. Amin'ny herin'ny tselatra, arovy amin'ny fahavaloko, mankalazà ny vavan'ny tafinan'ny tafondro ary avelao handresy izany.
Miaraka amin'ny kapoaky ny kapoakano sy ny divay, nozeno ny tanjaky ny vatako sy ny fanahiko ho an'ny ady mafy sy fiadiana.
Raiso ny epizà sy ny raisie ho fanomezana izay tadidiko foana ao an-tsaiko sy ao an-tranoko, ary miangavy anao aho, aza avela miala amiko mihitsy ianao isaky ny mitaky anao hiaro ny finoako, ny taniko, ny fianakaviako ary ny ianao miady; ary amin'ny farany, dia tarihinao foana aho amin'ny voninahitra toa anao.
Ity dia vavaka tsara be ho an'i Blisa Barbara hiaro an'i Santa.
Fitaovana ampiasaintsika rehefa mila izany isika, ny vavaka koa dia tonga ampinga antsika ary tsy amin'ny loza fotsiny fa manohitra ny ratsy rehetra tadiavintsika na ny fianakaviantsika.
Betsaka ny fijoroana ho vavolombelona momba ny mpino mahatoky izay nahazo valiny ara-potoana avy amin'i Santa Barbara tamin'ny fotoan'ny fangirifiriana, rehefa mangataka fiarovana amin'ny tenantsika isika na misy olona ao amin'ny fianakaviana dia mahomby izany.
Ho an'ny fahavalo
Andriamanitra ô! lavitry ny saiko, avy amin'ny fiainako, ireo olona ratsy sy maharikoriko izay manitsakitsaka.
Tonga ao aminao i Santa Barbara hampifangaro ahy, hampisaraka azy ireo amiko mba tsy handratra ahy ary miantso amim-pinoana aho ary manome anao ny fiainako.
Ianao, ilay mpiaro ambony ny olona, ​​ilay mpanaso-tsoa avy amin'ilay miantso anao sy kristiana malala-tanana izay manokatra ny tratranao ho an'ny olona tsara fanahy, omeo ahy ny fanampianao, ao aminy no hidirako ary avy aminy no hivoahako amin'ny ran'ny fonao, hanafaka ny tenako amin'izy ireo .
Esory amiko ny fialonana sy ny famadihana, arovy aho, miangavy anao amin'ny faharatsiana sy ny fahavalo aho, mba tsy hahatafintohina ahy ny ratsy ary tsy manisy ratsy ahy ny ratsy, esory ny mpifanolo-bodirindrina sy ilay naman-dratsy, ampifangaroo ny fahavaloko mba tsy hahavoa ahy, ampio aho hanjakazaka amin'izay rehetra te-hanao ratsy amiko ka afaka mandresy amin'ny toe-javatra manimba ahy.
Aza avela hanelingelina ny diako kristiana izy ireo ary raha maharitra izy ireo dia fanasaziana ny helo ho tambin'ny faharatsiany.
Manafaka ahy i Barbara masina, voatahy amin'ny ratsy rehetra, afaho ahy masina Barbara izay voatahy amin'ny fahavalo rehetra, arovy ny fiainako amin'ny loza mba hahafahako miaina ao anatin'ny fandriam-pahalemana sy milamina. Ho an'i Jesosy sy ny Virjiny.
Ka izay ihany.
Araraoty ny herin'izany vavaka Santa Barbara manjaka ho an'ny fahavalo izao.
Isika rehetra dia manana ny fahavalo ary na dia ao an-tranonay aza. Hitantsika ao amin'ny tantaran'i Santa Barbara izany rehefa nanafika azy ny rainy.
Mety tsy dia mijaly amin'ny fanafihana mivantana ianao fa tsy voatery hiantehitra amin'ny fahavalo mihitsy.
Ny vavaka ho an'ny fanapahana ny fahavalo miakatra any Santa Barbara no hany fomba tokana hanavotantsika ny tenantsika amin'ny fanenjehana sy ny loza.
Manjakazaka amin'ny mpiara-miasa tsy mahatoky
Sambatra Santa Barbara ianao izay afaka mampihavana olona marobe, manaova soa kely ho ahy, hahita fitiavana aho, hanao ny foko ho andriana sy ho marina, hanao fitiavana, ao am-poko afaka miditra ary hameno fahasambarana ahy, tiako ho afaka hahafantatra ny tena fitiavana, ny tena fahatsapana, Santa Barbara ianao izay manam-pahefana lehibe ao anatiny, omeo ahy izany famindram-po izany, enga anie mba ho tonga aminao ny fangatahako, mba hahazoako mandray ny fitahianao, Santa tia, ny fitiavana tonga lafatra tsy misy lainga, ianao fa manana ny hatsaran-toetra ianao ary dia gaga anao amin'ny zavatra rehetra el tontolo Mankanesa aty amiko ary omeo ahy ny fotoana ahazoako ny fitahianao, mila fotoana hafa avy aminao aho handefasako ny vavako.
Ny fivavako amin'Andriama- nitra mba hahafahany manao ny fiainako feno fitiavana, feno fiadanam-po mba hahafahanao manao azy ho any Santa Barbara mahagaga, mangataka aminao aho hanome ahy fitiavana, fitiavana bebe kokoa ary fitiavana bebe kokoa, fifaliana be dia be, fifaliana tsara, hevitra tsara. asa tsara, ampio aho handresy izany, fitiavana, ho ho ahy toy ny dingana iray, lalana, Santa Barbara, ianao izay afaka manao ny zava-drehetra, omeo ahy ary hanana fahatsapana fitiavana tonga aty amiko, matokia ny herinao sy ny tsara, amena.
Io karazana vavaka io dia mbola tena manakiana mafy azy noho ny sasany izay mihevitra fa fihetsika feno fitiavan-tena izany ka vita avy amin'ny avonavona fa voadona na handao. Tsy marina anefa izany.
Ny mivavaka mba hananana fahefana hanjaka amin'ny olona iray na ny toe-javatra manokana dia fihetsika iray azo avy amin'ny famoizam-po mila fahagagana ary tsy ahafahana mahazo izany.
Ny vavaka atao amin'ny finoana dia handray hatrany ny valiny izay angatahinay, na inona na inona fangatahana, Mahery ny vavak'i Saint-Barbara.